Iwu nke kpakpando ụtụtụ - WRSP
Fredrik Gregorius kwuru
Iwu nke ỤLỌ ỤLỌ ỤLỌ
1910 (Jenụwarị 8): A mụrụ Madeleine Montalban dị ka Madeleine Sylvia Royals na Blackpool, Lancashire,
1930: Montalban kwagara London.
1933: Montalban malitere ide maka Ndụ London.
1953: Montalban malitere ide maka Prediction.
1956: E hiwere Order nke Morning Star.
1961: Alfred Douglas ghọrọ nwata akwụkwọ Montalban.
1967: Michael Howard kpọtụụrụ Madeline Montalban.
1982: Madeline Montalban nwụrụ n'ọrịa cancer akpa ume na afọ iri asaa na abụọ.
1982: E nyere nwa ya nwanyị ikike ọrụ Montalban´ nke nyere ikike ịga n'ihu n'ọrụ nke Order of the Morning Star nye Jo Sheridan na di ya Alfred Douglas.
2004: Michael Howard's Akwụkwọ dara E bipụtara ndị mmụọ ozi.
2012: Jullia Phillips Madeleine Montalban, Magus nke St. Giles e bipụtara.
Madeline Montalban na Nicolas Heron onye ọ zutere na 1956. Iwu nke Morning Star (OMS) hiwere ya na 1952. E hiwere Iwu ahụ maka mmasị ha nwere na esotericism, astrology, na mmụọ ozi Lucifer. Montalban bụ ihe na -akwali OMS na ọ ga -abụkwa isi echiche ya. Mgbe o mechara kewaa Heron, ọ nweghị ihe na -egosi na ọ gara n'ihu na mmemme ọ bụla metụtara OMS.
A mụrụ Madeleine Montalban na Jenụwarị 8, 1910 na Blackpool, Lancashire, dị ka Madeleine Sylvia Royals. Ọ ga -emesịa nweta ọtụtụ noms de plume (Dolores North, Madeline Alvarez, Madeline Montalban, na aha ndị ọzọ) nke o jiri mee ihe mgbe ọ na -ebipụta akụkọ na akwụkwọ nta.
Dabere n'ihe a na -amachaghị banyere oge ọ bụ nwata, nne na nna ya eyighị ka ha nwere mmasị n'ihe gbasara esoteric. Dị ka Julia Phillips si kwuo, ọ bụrụ na enwere ụdị mmụọ ọ bụla dị n'oge ọ bụ nwata ọ bụ Iso Christianityzọ Kraịst (Phillips 2012: 22). Montalban ga -emecha kọwaa isi okwu nke Akwụkwọ Nsọ, nke na -adabaghịkarị n'ụdị Iso Christianityzọ Kraịst, wee kọwaa onwe ya dị ka onye na -ekpere arụsị, mana Akwụkwọ Nsọ bụụrụ ya isi mgbe ọ na -etolite ma ga -aga n'ihu na -arụrụ ya ọrụ dị mkpa. Ọ ga -emecha kwuo na Agba Ochie bụ ọrụ anwansi na Agba Ọhụrụ bụ ọrụ omimi (Howard 2016: 55; Phillips 2012: 26). Madeline kwagara na mmalite afọ iri abụọ ya na London, ikekwe ịchụso ọrụ nta akụkọ. Enwere akụkọ na -emegiderịta gbasara Montalban´s kwagara London na mmekọrịta ya na ihe mgbaasị London na 1930. Otu akụkọ dị oke egwu bụ na nna ya zigara ya London ka ọ rụọ ọrụ maka onye ode akwụkwọ anwansi a ma ama Aleister Crowley (1875-1947), ebe nna ya amaghị ihe ọ ga-eme ya (Phillips 2012: 30 ). Agbanyeghị, enweghị akaebe na akụkọ a bụ eziokwu, na ọ nwere ike bụrụ na onye na -enweghị mmasị na mgbaasị ga -eziga nwa ya nwanyị ka ya na Crowley nọrọ ka ọ dị mma. Ọzọkwa, enweghị aha Madeleine n'akwụkwọ ndekọ Crowley site na oge ahụ. Ọ bụ ezie na akụkọ ezigara ya ka ọ rụọ ọrụ dị ka odeakwụkwọ Crowley bụ ihe ọchị mana akụkọ ifo, enwere ụfọdụ ihe na -egosi na o mechara mata Crowley. N'agbanyeghị nke ahụ, a na -agbagha agbagha na ebe ha ma ọ bụ ugboro ole ha na -ezukọ. Akụkọ ya gbasara Crowley sitere na akụkọ ndị enyi ya mechara na ajụjụ ọnụ redio na 1970. Ọ bụ ezie na eziokwu nke akụkọ ndị a ghe oghe maka arụmụka, ihe dị mkpa bụ ka ọ ga -esi jiri Crowley mee ihe dị iche iji gosipụta ụdị anwansi nke ya. Montalban weere na Crowley dara ada nke ukwuu n'ịchụso anwansi ya n'ihi enweghị ihe ọmụma banyere ịgụ kpakpando na mmemme ihe nkiri na ihe egwu nke ọ na -etinye iji mee ka ndị mmadụ nwee mmasị. Ọ bụ ezie na nke a ekwughị ọtụtụ ihe gbasara usoro Crowley nke Magick n'onwe ya, ọ na -emesi akụkụ abụọ nke nkuzi Montalban gbasara anwansi ike. Nke mbu, mkpa nke ịgụ kpakpando, nke bụ isi ihe niile o mere, na nke abụọ, ịjụ ihe ọ hụrụ dị ka ụdị anwansi nke ihe anwansị na -anọchite anya ya site na mgbaasị dịka The Hermetic Order of the Golden Dawn and the offshoots (Phillips 2012: 32) ).
Ibi na London Montalban malitere ịrụrụ ya ọrụ Ndụ London dị ka onye na -ede akwụkwọ ịgụ kpakpando ha na 1933, na -ede n'okpuru pseudonyms dị iche iche. Na 1939, ọ lụrụ onye ọrụ mgbanyụ ọkụ, George Edward North, onye ya na ya nwere nwa nwanyị. Alụmdi na nwunye ahụ akwụsịghị, o wee hapụ ya. Na 1947, ọ ghọrọ onye ntinye aka mgbe niile Ndụ London na -ede kọlụm ịgụ kpakpando ha. Dabere na Akwụkwọ Lumiel, gburugburu 1944 ọ malitere ịmalite inwe mmasị miri emi na Lucifer wee malite ịchọ ozi ndị ọzọ gbasara mmụọ ozi ahụ, mana ọ nweghị nke a n'ime ihe odide ọha ya n'oge ahụ (Phillips 2012: 112).
Ọ bụ ezie na oke mmekọrịta ya na Crowley bụ arụmụka, Montalban abụrụla akụkụ nke mgbaasị na London na 1940. Ọ ga-amata ndị mmadụ dịka Gerald Gardner (1884-1964), Kenneth (1924-2011) na Steffi Grant (1923-2019) na Michael Houghton, onye guzobere Atlantic Bookshop na 1922. Ọ ga-emesịa nyere Gerald Gardner aka n'akwụkwọ akụkọ ya. Nnukwu Ime Anwansi nke ebipụtara site na Atlantis na 1949, ma ọ bụ dịka ụfọdụ akụkọ si kwuo, o dere akwụkwọ akụkọ niile dabere na ndetu Gardner (Phillips 2012: 75-77). Akwụkwọ akụkọ ahụ bụ nke mbụ Gardner kwupụtara echiche ya banyere Ịta Amoosu, n'agbanyeghị na ọ bụ n'ụdị akụkọ ifo. Ọ bụ ezie na ọ dị ka Montalban na Gardner na -arụkọ ọrụ ọnụ wee gaa n'ihu na -ezukọ n'etiti mmadụ n'etiti afọ 1960, enwere ụfọdụ ndapụta, mana ihe kpatara ya edoghị anya. Ka Gardner nwụrụ na 1964, echiche ọjọọ nke Montalban banyere ya na Wicca gaara amalitela mgbe Gardner nwụsịrị (Phillips 2012: 77). Nwa akwụkwọ mbụ ya bụ Michael Howard (1948-2015) ga-emesịa dee na “o gosipụtara iro megide Gardner na Wicca nke metụtara ịkpọasị” Howard 2004: 10). Mgbe Howard, onye kpọtụrụ Montalban na 1967, bidoro n'ime Gardnerian Wicca na 1969, ọ na -ebute ezumike zuru oke na Montalban onye hụrụ nke a dịka "aghụghọ" (Howard 2004: 11; Phillips 2012: 77). N'agbanyeghị echiche ọjọọ ya na Wicca, o mechara mata Alex na Maxime Sanders na ngwụsị 1960, ndị Sanders tinyekwara akụkụ nke nkuzi mmụọ ozi ya n'ọrụ ha (Sanders 2008: 237). N'agbanyeghị nke ahụ, Montalban na -edo anya mgbe niile na ọ bụghị amoosu na ụdị anwansi ya enweghị ihe jikọrọ ya na Ịta Amoosu. Site na ihe odide ikpeazụ nke Michael Howard etinyerela echiche ya n'ime ihe enwere ike ịkọwa dị ka "Ịta Amụma Lucifer" (ma ọ bụ "Ọrụ Luciferian"), nke bụ okwu Howards mbụ (Howard 2004: 12, Gregorius 2013: 244).
Na 1953, ọ malitere ịrụ ọrụ na magazin ahụ Amụma ma ga -aga n'ihu na -edere ha akwụkwọ ndụ ya niile. Ọtụtụ n'ime akụkọ ya lekwasịrị anya n'ịgụ kpakpando na nkwenkwe onwe ya anaghị apụtakarị n'ime ha.
Na 1956, ya na onye ọrụ ibe ya Nicolas Heron hiwere Order nke Morning Star. A haziri Iwu ahụ ka ụmụ akwụkwọ wee nwee ike mezue usoro mmekorita karịa ụdị Masonic nke mbido dị na Golden Dawn, Society of Inner Light, ma ọ bụ Ordo Templi Orientis, na enweghị mmemme otu. Ọ bụ ezie na imirikiti ndị nwere mmasị ga -eme ya naanị site na ntuziaka e dere ede ma rụọ ọrụ maka onwe ha, ọnụ ọgụgụ dị nta ga -emecha bụrụ ụmụ akwụkwọ onwe nke Montalban (Phillips 2012: 97. Na 1964, Montalban na Heron kewara, mana OMS gara n'ihu na -arụ ọrụ ha.
N'agbanyeghi na o so n'òtù anwansi na London, onweghi ihe akaebe na -egosi na o tinyela n'usoro anwansi ma ọ bụ nwee nkuzi ọ bụla site na isi mmalite. Enwere nkọwa, yana ntụkwasị obi dị iche iche, nke ya na ndị ọzọ na -arụkọ ọrụ, dị ka Gardner na Grant, mana ọ dị ka ọ nweghị mmalite mmalite. Kama, ihe ọmụma ya dabere n'ịmụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị mbụ yana, ka Howard siri kwuo, ọ dị ka ọ malitere inweta mkpughe n'aka Lucifer na 1946 (Phillips 2012: 85; Howard 2016: 56).
Montalban nwụrụ na Jenụwarị 11, 1982, ikike ọrụ ya dịịrị nwa ya nwanyị. Mgbe olili ozu ahụ gasịrị, enwere nkwekọrịta n'etiti ya, Jo Sheridan, na Alfred Douglas na Sheridan na Douglas ga -aga n'ihu na -enye nkuzi akwụkwọ ozi nke OMS. Sheridan na Douglas maara Montalban na 1960, Douglas bụkwa otu n'ime ụmụ akwụkwọ ya na ya bi mgbe ọ banyere n'ụlọ ọhụrụ ya na Street Grape na 1966 (Phillips 2012: 37).
Ebe etiti maka mmasị na -aga n'ihu na Montalban bụ akwụkwọ Michael Howard, [Foto dị n'aka nri] onye bụ nwa akwụkwọ Montalban na 1960. N'agbanyeghi na mmekọrịta ha kwụsịrị n'ihi mmasị o nwere na Wicca, ọ bụ site na mbọ ya na The Isi ite, nke Howard bụ onye nchịkọta akụkọ n'etiti ntọala ya na 1976 na ọnwụ ya, na mmasị Montalban ka dịgidere. Na 1990s, ọ malitere ide edemede n'okpuru aha de Fraume "Frater Ashtan" gbasara Luciferianism (Howard 2004: 13). Mgbe ọ na -edebe mmasị ya na Luciferianism ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri atọ, ọ ga -emesịa nwekwuo ike mepee maka ya. N'afọ 2001, Ogidi Tubal Ken E bipụtara ya, ya na Nigel Jackson dere, na Akwụkwọ nke dara ndị mmụọ ozi e bipụtara na 2004. [Foto dị n'aka nri Nke ikpeazụ na -enye ngosi Montalban´s nke Lucifer na ọdịnala esoteric nke o mepụtara.
Montalban ebipụtaghị ozizi esoteric ya n'oge ndụ ya niile. Mgbe ọ na -ede akwụkwọ nke ọma, ihe odide ọha ya na -abụkarị maka ịgụ kpakpando. Naanị akwụkwọ ya, na Tarot, ka ebipụtara mgbe ọ nwụsịrị na 1983. Iji ghọta ihe a na -akụzi na OMS anyị ga -enwerịrị ntụkwasị obi na nkọwa na nkọwa sitere n'aka ụmụ akwụkwọ ya. Onye dere ọtụtụ ihe na Montalban bụ Michael Howard onye bụ nwa akwụkwọ ya n'afọ 1960. Howard na -ejikọ nkuzi Montalban na nkọwa nke Amoosu na Luciferianism, mana dịka onye isi OMS ugbu a, Alfred Douglas si kwuo, Howard gosipụtara Montalban ziri ezi (Douglas, akwụkwọ ozi nkeonwe, Ọgọst 8, 2021).
Ịgụ kpakpando na -arụ ọrụ dị mkpa na nkuzi nke OMS, Montalban rụrụ ụka na -enweghị ihe ọmụma gbasara ịgụ kpakpando, ọrụ anwansi agaghị ekwe omume. Nzukọ a na -akụzikwa na mmadụ niile nwere ndị mmụọ ozi pụrụ iche nke ha, yana ebumnuche bụ isi nke ọrụ n'ime OMS bụ ịzụlite mmekọrịta ndị mmụọ ozi a. Otu esi abịaru nso na otu esi arụ ọrụ na ndị mmụọ ozi na -ekpebi site na nghọta nke kaadị ọmụmụ mmadụ. Ịgụ kpakpando na -emetụta ihe niile dị n'ime OMS, yana dị ka iwu ndị ọzọ esoteric, enwere akwụkwọ ozi ebe ndị mmụọ ozi dị iche iche na -emetụtakwa akara zodiac na mbara ala dị iche iche (Phillips 2012: 98.
Ozizi a kacha mara amara na Montalban na -emetụta mmụta okpukpe ya gbasara Lucifer, ma ọ bụ Lumiel dịka ọ họọrọ ịkpọ ya (Howard 2016: 56). Lumiel pụtara dị ka Montalban si kwuo "Ìhè nke Chineke." Ọ bụ ezie na ọtụtụ nkuzi dị na OMS dabere na Akwụkwọ Nsọ, Montalban kọwara onwe ya dị ka onye na-ekpere arụsị wee lelee Lumiel ka ọ dabere na nkuzi tupu oge Ndị Kraịst, na-ezo aka n'okpukpe ndị Kaldea dị ka mmalite (Phillips 2012: 99; Howard 2004). Ndị Kaldia chọtara Montalban karịsịa ka ọ na -ewere usoro okpukperechi na nke anwansi ha dabere na ịgụ kpakpando.
Ọ bụ ezie na Lumiel bụ onye ama ama na nkuzi OMS, ọ pụtaghị dị ka agwa dị mkpa ruo oge nke iri na abụọ mgbe enyere onye ezi omume otu. Akwụkwọ Lumiel nke na -akọwa akụkọ Lumiel. Howard na -ezokwa aka n'ihe odide akpọrọ Akwụkwọ nke Devil nke nwere akụkọ yiri ya mana ọ na -elekwasị anya na ọnụ ọgụgụ Baphomet (Howard 2016: 59). Akwụkwọ Lumiel bụ naanị ibe iri abụọ na otu. E hotara site na Phillips, ọ na -amalite site na nkwupụta na Montalban bidoro ọmụmụ ya na Lucifer na 1944. Dabere na Phillips na Howard, a na -egosi Lucifer dị ka ike maka mmalite nke mmadụ, na obi nkoropụ nke Lucifer jikọtara ya na amaghị mmadụ. Ọ bụ n'ihi amaghị mmadụ ka Lucifer ji ọnyà, nnwere onwe nke lucifa bụkwa ntọhapụ nke mkpụrụ obi mmadụ na edemede ya.
Akụkọ ọdịbendị ewepụtara na Akwụkwọ Lumiel bụ na Chineke kere ụwa, onye a na -ahụ dị ka "ihe nwere ihu abụọ, izu oke nke nwoke na nwanyị" (Howard 2004: 27). Chineke kewara ike ya nha anya n'etiti onwe ya na nwanyị ya, na -ekewa nkewa n'etiti Ìhè na ọgụgụ isi, na site na nke a na -ekepụta Lumiel, onye mbụ. Ọzọkwa, site na nkewa a, Ben Elohim na -apụta, ụmụ ndị nwoke na ụmụ nwanyị nke Chineke. Ndị a na -aghọ ndị mmụọ ozi ma atọrọ ka ha chịa mbara ala asaa ahụ. Akụkọ na -esote bụ ngwakọta nke ozizi gnostic agwakọtara na nghọta Montalbans banyere evolushọn, ikekwe sitere na Helena Blavatsky. Ndị mmụọ ozi na -eduzi ndụ n'elu ụwa ka ha zuo oke na n'elu n'ụdị Astral bụ "Ray People" nke bụ ebumnuche mmadụ evolushọn. Kama ikwe ka evolushọn na -aga n'ihu, Lumiel na -achọ ịkwalite ya site n'ịgba ya ọsọ. Dị ka Howard si kwuo:
Dị ka nkuzi nke OMS si kwuo, Lucifer nwere nkụda mmụọ na mmalite nwayọ nke agbụrụ mmadụ oge ochie, nke a kọwara dị ka '' enwe enweghị isi '', ya mere ndị mmụọ ozi ji '' ụmụ nwanyị nke ụwa '' mee mkpọtụ ha. Ọ bụ ihe nwute na ụmụ mmadụ agbabeghị nke ọma iji ike nke usoro a nyere ha ma jiri ya mee ihe na -eduga n'ọgba aghara na ọgba aghara (Howard 2016: 59).
Nke a butere Lucifer ịbụ onye tọrọ atọ n'okwu dị ka ntaramahụhụ ma manye ya ịmaliteghachi anụ ahụ n'ime afọ niile iji kuziere mmadụ ụzọ nke nghọta wee bụrụ "Ìhè nke ụwa." Ọ dị ka Montalban emetụtala Frazer, na ozizi nke chi na -anwụ anwụ na nke a kpọlitere n'ọnwụ ka ọ na -ede:
Ọ bụghị ruo mgbe mmadụ matara onye na ihe m bụ ka ha mara ma ghọta, mana ahụhụ nke m, nke ga -abụrịrị nke anụ ahụ, dịka ahụhụ nke mmadụ ga -abụrịrị… Abụ m onye nche, ka a chụga m n'ọzara na -ata ahụhụ ihere na amaghị ndụ mgbe ndụ gachara, ruo mgbe njehie ahụ m mere rụpụtara onwe ya site na mmadụ wee mara ihe, ya mere ọ dị mma nke ọma, site na ahụmịhe (Motalban hotara na Howard 2004: 123 ).
Ọbụna a hụrụ Kraịst dịka avatar nke Lucifer na nkuzi Montalbans. Enwere ike ịhụ nkuzi Montalban dị ka ụdị nke neo-Gnosticism ebe mmụọ tọrọ atọ n'okwu wee chọọ ntọhapụ. Ogige Iden bụ ọmụmaatụ ebe astral (Howard 2004: 31). Ihe onyonyo nke Lucifa dabere na Baịbụl na Akwụkwọ Inọk mana a tụgharịrị ya ọzọ na Lucifa bụ ike maka ihe ọma nke ga -emecha laghachite n'ebube mbụ ya. Lucifer abụghị onye nke Setan, ọbụlagodi na akụkọ ifo gbara ya gburugburu dabere na ọdịda Lucifer na ndị mmụọ ozi nupụrụ isi. Enwere ike ịhụ nkuzi nke OMS dị ka Luciferian mana ọ bụghị nke Setan. Enweghị esemokwu dị n'etiti Chineke na Lucifer, kama Lucifer na -abụ, site na njehie mbụ ya, onye ndu maka mmadụ. Howard jiri echiche Montalban tụnyere nke Gurdjieff, ebe ọ na -ele ọtụtụ mmadụ anya dị ka ndị na -ehi ụra.
Montalban dị oke mkpa maka ihe ọ hụrụ dị ka ihe nkiri nke anwansi emume nke ọ hụrụ na nzukọ dị ka Hermetic Order of the Golden Dawn. Nkọwa ndị dị na mmemme ọ na -eme na -adịkarị mfe, na -eji kandụl, tarot, na oge ịgụ kpakpando. [Foto dị n'aka nri] Ememme ndị a dabere na mbara ala asaa na mmekorita dị n'etiti ha na eserese ọmụmụ gị. Mbara ala asaa na mmụọ na-achị ha, akara zodiac na ụbọchị izu bụ (Phillips 2012: 103):
Michael (Anyanwụ), Sọnde, Leo
Gabriel (Ọnwa), Mọnde, Ọrịa kansa
Samael (Mars), Tuesday, Aries na Scorpio
Raphael (Mercury), Wenezde, Gemini na Virgo
Sachiel (Jupiter), Tọzdee, Sagittarius na Pisces
Anael (Venus), Fraịde, Taurus na Libra
Cassiel (Saturn), Satọde, Capricorn na Aquarius
Emebere emume ndị ahụ ka eme ya n'otu n'otu. Ozizi nke OMS n'onwe ha bụ ihe nzuzo ma mepere naanị maka ndị otu, mana na ngosi ha, ha na -arụtụ aka na anwansi mgbazigharị dị ka isi iyi nke mmụọ nsọ:
Ndabere nke sistemụ ya bụ anwansi Hermetic, dị ka etolite n'oge Renaissance Italiantali na Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Cornelius Agrippa na John Dee n'etiti ndị ọzọ. Isi mmalite ya gụnyere Picatrix na Corpus Hermeticum, Heptameron nke Peter d'Abano, Igodo nke Solomọn, Ime Anwansi Dị Nsọ nke Abramelin, na Agrippa's Occult Philosophy (OMS nd).
Emebere ememme ndị ahụ ka nwa akwụkwọ n'onwe ya mee ya dịka akụkụ nke nghọta ha gbasara anwansi. Akụkụ dị mkpa na nke a bụ ojiji na iwu ọtụmọkpọ n'okpuru usoro ịgụ kpakpando ziri ezi. Na mbido horoscope maka ụmụ akwụkwọ ọhụrụ nke kpughere ụmụ akwụkwọ mmụọ Sun na Ọnwa. A na -akpọkwa nkuzi nke mbụ Ihe nzuzo nzuzo nke ọnwa (Phillips 2012: 96) na -egosi ilekwasị anya n'ọnwa.
Ọ bụ ezie na ọ na -ahazi nke ọma, a ka na -ekekwa OMS n'ọkwa dị iche iche dabere n'otú nwa akwụkwọ ahụ siri dị elu. Mgbe Montalban dị ndụ, ọ kpọbatara ụmụ akwụkwọ nke ọ kuziri n'onwe ya nke ga -etolite ime ime. N'agbanyeghị nke ahụ, enweghị ogo doro anya, sistemụ ahụ dabere na ịjụ ụdị iwu dabere na ogo ebe ọ na-adịkarị na 1950 (Phillips 2012: 96-98).
Onye ndu izizi maka OMS bụ Montalban na Heron. Mgbe mmekọrịta ha kwụsịrị na 1964, ọ gara n'ihu n'onwe ya. Mgbe ọnwụ Montalban nwụrụ na 1982, enyere nwa ya nwanyị ikike nwebisiinka nke ọrụ ya bụ onye kpọtụrụ Jo Sheridan na Alfred Douglas ka ọ gaa n'ihu n'ọrụ ahụ na OMS. OMS ka na -arụ ọrụ n'okpuru nduzi Alfred Douglas.
Isi okwu gbasara OMS bụ nkwanye ugwu ya na Lucifer, nke butere mkpakọrịta na ofufe Setan. Dabere na ihe odide nke Michael Howard, ọ dị ka enwere ụfọdụ ihe ịma aka n'ime ihe nkiri Pagan nke Britain ịpụta dị ka Luciferian n'ihi na enwere ike ijikọ ya na ofufe Setan. OMS ekwusiri ike na ọ na -ele Lucifer anya dị ka onye dị mma na ọ naghị akwalite ofufe Setan. Kama, OMS na -ahụ Lucifer dị ka “onye na -eweta Ìhè” nke na -emepe mmụọ mmadụ ka ọ matakwuo (Douglas, nkwukọrịta onwe onye, ​​Ọgọst 13, 2021).
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ndị nkuzi esoteric, enweela ajụjụ gbasara akụkọ ndụ Montalban na kedu ka akụkọ ya gbasara mmekọrịta ya na ndị mgbaasị oge ahụ bụ eziokwu. Nke a bụ ikpe, dịka e kwuru na mbụ, gbasara otu o siri mata Aleister Crowley. Ewezuga akụkọ n'onwe ya, e nwekwara akụkọ sitere na isi mmalite ndị ọzọ a na -enyo enyo. Gerald Gardner yiri ka ọ na -egosi na Montalban nwere njikọ chiri anya na Lord Mountbatten nke siri ike igosipụta, dịkwa ka Gardner si kwuo na ọ rụrụ ọrụ n'ezie dị ka onye ndụmọdụ gbasara mmụọ na "onye na -ahụ maka onwe ya" (Heselton 2000: 301). Ọ dịkwa oke mma bụ nkọwa emume Montalban mere na Gerald Gardner na Kenneth Grant nke dị na Grant´s N'abalị nke Iden (Nyekwa 1977: 122-24; Phillips 2012: 83). Ụdị okwu ndị a bụ ihe a na -ahụkarị n'ọtụtụ akụkọ ndụ, yana nyocha ọzọ na OMS na Montalban nwere ike ị nweta nghọta ka ukwuu banyere akụkọ ndị a. Agbanyeghị, dị ka Julia Phillips si kwuo, onye dere naanị akụkọ gbasara Montalban, mgbe ọ na -agba ndị na -ama ya ajụjụ ọnụ, onyonyo ya na -eme ka ọ pụta ìhè, na ọtụtụ akụkọ yiri ka ọ na -agbanwe agbanwe ma na -enyocha ọtụtụ isi mmalite (Phillips, akwụkwọ ozi nkeonwe Ọgọst. 13, 2021).
Montalban na OMS bụ ezigbo ihe atụ nke Luciferianism, ọbụlagodi na nkọwa ya adịchaghị n'ụdị n'ụdị. Ọ bụ ezie na ya onwe ya jụrụ ịta amoosu, site n'ihe odide nke Michael Howard ọ bụrụla nnukwu ihe mkpali maka Amoosu Luciferian nke oge a.
Image #1: Michael Howard.
Foto #2: Cover nke Akwụkwọ nke dara Ndị mmụọ ozi.
Image #3: Madeline Montalban si Nwoke, Akụkọ ifo na Ime Anwansi n'afọ ndị 1970
Douglas, Alfred. 2021. Akwụkwọ ozi nkeonwe, Ọgọst 13.
Grant, Kenneth. 1977. N'abalị nke Iden. London. Mbipụta akwụkwọ Skoob.
Gregorius, Fredrik. 2013. "Ịta Amoosu Lucifer: N'okporo ụzọ dị n'etiti ikpere arụsị na ofufe Setan." Pp. 229-49 n'ime Tù Ekwensu: Okpukpe Setan na Oge A, nke Per Faxneld na Jesper Aa dere. Petersen. New York: Mahadum Oxford University.
Heselton, Philip. 2003. Gerald Gardner na ite nke mmụọ: nyocha n'ime isi mmalite nke amoosu Gardner.. Somerset. Mgbasa Ozi Capall Bann
Heselton, Philip. 2000. Mgbọrọgwụ Wiccan: Gerald Gardner na ntughari amoosu ọgbara ọhụrụ. Berks. Mgbasa Ozi Capall Bann.
Howard, Michael. 2016. "Ozizi nke Ìhè: Madeline Montalban na Order nke Morgning Star." Pp 55-65 na Nkume na -enwu enwu: Lucifer na Western Esotericism, nke Michael Howard na Daniel A. Schulke deziri. Richmond Vista: Aka aka atọ Pịa.
Howard, Michael. 2004. Akwụkwọ nke ndị mmụọ ozi dara. Somerset: Mbipụta Capall Bann.
OMS. nd "Madeline Montalban na Order nke Morning Star." Nweta site na https://www.sheridandouglas.co.uk/oms/ na 15 August 2021.
Phillips, Julia. 2021. Akwụkwọ ozi nkeonwe, Ọgọst 13.
Phillips, Julia. 2012. Madeline Montalban: Magus nke St Giles. London: Akwụkwọ akụkọ Neptune
Phillips, Julia. 2009. "Madeline Montalban, Elemental na Fallen Angels." Pp 77-88 na BAkụkụ nke Eluigwe: Nchịkọta edemede na -enyocha mmalite, akụkọ ihe mere eme, ọdịdị na omume anwansi nke ndị mmụọ ozi, ndị mmụọ ozi dara na ndị mmụọ ọjọọ., nke Sorita d´Este deziri ya. London: Avalonia.
Sanders, Maxine. 2008. Firechild: Ndụ na Ime Anwansi nke Maxine Sanders. Oxford: Mandrake nke Oxford.